Akwale Environment - Key nke iji nweta Ezi Ịdị
Isi Ihe Na-eme Iji Nweta Ezi Uche na Gburugburu Egwu: Ikike bụ ikike iji dozie ọnọdụ na-agbanwe agbanwe ma meghachi omume maka mkpa ndị na-emepe emepe. Na ngwa ngwa na-aga ngwa ngwa, ọnọdụ nchịkwa dị mgbagwoju anya, ntụgharị ntụgharị dị ịrịba ama na-agbakwụnye ịkwụ ụgwọ mmefu ego na arụmọrụ na-arụ ọrụ dị mma. A na-eme nke a site n'ime ka usoro nhazi oru ngo na-anabata ozi ọma, nkwupụta na mgbanwe ndị na-apụta na-egbu egbu.
Ngalaba nke ihe kariri akwukwo kwesiri ntukwasi obi:
Gbalịa ịhazi windo (ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu, obere ọrụ jikọtara ọnụ na usoro mmechi).
Ihe odide kachasị elu (emere ka o doo anya site na nkenke nhazi na windo na njikwa aka site na njikwa usoro).
Ịbawanyewanye nkwekọrịta nke ndị ahịa (nke a na-akwado site na obere ọrụ na nlekọta ihe omume).
Mkpakọrịta ọ bụla nwere ike ịbawanye uru ma ọ bụ ruo n'ókè nke na ha ga-eme ndokwa n'usoro na-agba ọsọ na ụma maka ogologo oge. Ntughari okwu a na-achọ okwu okwu dị nkenke na ịkọ nkọ.
Otu òtù na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na usoro ndị na-akwado ọrụ na-eburu n'uche nyochaa ugboro ugboro na mgbanwe nke usoro mmebi iwu nke ọrụ. Ịgbasawanye ịba ọgaranya abụghị naanị n'ihi ịnweta ụdị ngwá ọrụ Agile. A na-ewere usoro nlekọta oru ngo dị ka agile n'ihi na ha dị nnọọ nha na ọnọdụ ndị na-agbanwe agbanwe, na-aṅa obere ntị na usoro ndị eji.
Usoro nhazi mmiri na-eme ka ndị enyi na-eme ka ha ghara ịdị na-arụ ọrụ. Ịhụ ọtụtụ ihe tupu ị nyocha na akwụkwọ na-eme ka ndokwa ndị na-agbanwe agbanwe ghara ịmalite ihe ga-abịa. Mgbe nlezianya zuru ezu ezuchara, ihe ndị a chọrọ ugbu a anaghịzi adị n'ihi mgbanwe ndị ọkachamara na ahịa.
Nhazi a bụ usoro Agile, nke na-enye ohere ịmepụta uru site na ịga n'ihu nke ọrụ mkpụmkpụ karịa nke a kpachapụrụ anya. Ọrụ ndị a dị mkpirikpi na-enye ohere ka a gbanwee usoro mkpochapụ n'ozuzu ya. A na-edekọ ihe ederede iji mee ka ịkwado ndozi. A na-edepụta akwụkwọ site na ihe ederede, dịka ọmụmaatụ, ndokwa na ọchịchọ, maka mmepụta ihe dị nso na akwụkwọ ederede maka ọdịda ogologo oge. Ngwakọta bụ usoro ihe na-eme ka a na-arụ ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mkpa maka ndị ahịa, na-eme ka ebe a dị ugbu a ma na-achọpụta ogologo oge.
Inwekwu okwu kwesiri ntukwasi obi bu ime ka ihe obula nwere ike ime gi ma o bu na enweghi ike itinye aka na usoro mmezi nke Agile. Nzube sitere na ịnweta usoro nhazi usoro ihe omume na-eme mgbanwe.
Nzọụkwụ 7 iji dozie atụmatụ nkà na ụzụ IT
Ihe Akaebe Kasị Mkpa maka Ọrụ Ntuzi